UYiwu ungumbungazi oveleleimakethe yezimpahla,china ifenisha wholesale marketikhula ngokushesha okukhulu, manje inemakethe yefenisha emithathu emikhulu okuhlanganisa imakethe yefenisha ye-Yiwu, imakethe yefenisha yaseTongdian, imakethe yefenisha yaseZhanqian Road.Ngakho ungathola ifenisha yasendlini kanye nefenisha yehhovisi kulezo zimakethe, kungakhathaliseki ukuthi isitayela saseShayina noma isitayela sasentshonalanga.
Imakethe yefenisha ye-Yiwu imaphakathi ne-Yiwu West (West Road No. 1779).Iwukuphela kwemakethe yefenisha yochwepheshe emikhulu egunyazwe uhulumeni, ehlanganisa indawo engamahektha angama-80, enendawo yokwakhiwa isiyonke engamamitha-skwele angama-60,000.
Isitezi sokuqala esingaphansi kwemakethe yefenisha ye-Yiwu eyefenisha evamile yasendlini kanye nefenisha yasehhovisi;Isitezi sokuqala esosofa, i-sofa, i-rattan, ifenisha ye-hardware nengilazi, nezindawo zesevisi ezihambisanayo;isitezi sesibili sepuleti lesimanje, ifenisha yekamelo lokulala lezingane;isitezi sesithathu se-European, classical, mahogany, ifenisha yokhuni oluqinile;Isitezi sesine sebhizinisi lefenisha ye-boutique emangalisayo;Isitezi sesihlanu se-carpet fabric wallpaper yelanga.
Imakethe yefenisha ye-Yiwu Tongdian inikeza ifenisha yamanani ashibhile yesandla sesibili kanye nezintsha.Izihlalo, imibhede, osofa, amakhabethe, njll.Iseduze nedolobha lezohwebo lamazwe ngamazwe i-Yiwu.
Imakethe yefenisha yomgwaqo iZhan Qian iyindlela enhle yokuthenga ifenisha ngesabelomali.Izinto ezivamile ezithengiswayo zihlanganisa imibhede, amadeski, imibhede yosofa, izihlalo, ifenisha yasehhovisi, amatafula, izisefo, nezitendi zamajazi.